နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်ဗီဇာလိုအပ်ချက်များ Antigua နှင့် Barbuda သို့လာရောက်လည်ပတ်သူများအတွက် Antigua နှင့် Barbuda နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်ဗီဇာလိုအပ်ချက်များ Antigua နှင့် Barbuda သို့လာရောက်လည်ပတ်သူများအတွက်
Antigua နှင့် Barbuda သို့ uda ည့်သည်များအတွက်အောက်ပါ ၀ င်ရောက်ရန်လိုအပ်ချက်များမှာ -
အများစုမှာဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံသားများ (အောက်တွင်စာရင်းကြည့်ပါ) အားလပ်ရက်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါများကို ၀ င်ရန်ဗီဇာမလိုအပ်ပါ။ လာရောက်လည်ပတ်သူများသည်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကြာမြင့်စွာနေရန်ခွင့်ပြုထားသည်မှာ -
ခ) သူတို့ထွက်ခွာသည့် နေ့မှစ၍ အနည်းဆုံးခြောက်လသက်တမ်းရှိသည့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်သည်
င) သူတို့သည် Antigua နှင့် Barbuda တွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည်
ANTIGUA နှင့် BARBUDA အတွက် VISA / ENTRY လိုအပ်ချက်များ
ဗီဇာလျှောက်လွှာကိုဤနေရာတွင် နှိပ်၍ ကူးယူနိုင်ပါသည် (PDF - 395Kb) ။
တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့အထိသောကြာည ၉း၀၀ နာရီအထိည ၅း၀၀ နာရီဖွင့်သည်။ ချိန်းဆိုမှုများမလိုအပ်ပါ။ ဗီဇာလျှောက်လွှာတင်ရန်အချိန်သည်ခန့်မှန်းခြေဖြစ်သည်5အလုပ်လုပ်ရက်။
လျှောက်လွှာတင်ပြီးပါကလျှောက်ထားသူများကိုကောက်ခံမည့်ရက်ကိုအကြောင်းကြားလိမ့်မည် အားလုံး ထောက်ပံ့စာရွက်စာတမ်းများကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ၊ ပြုပြင်ခြင်းတွင်နှောင့်နှေးနိုင်သည်။ ကိုးကားထားသောအပြောင်းအလဲကာလသည်အကြမ်းဖျင်း ဖြစ်၍ အာမခံချက်မရှိပါ။ လျှောက်ထားသူသည်လျှောက်လွှာကိုလုပ်ဆောင်ရန်အချိန်လုံလုံလောက်လောက်မရှိခြင်းကြောင့်ကိစ္စတစ်ခုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
(ကျေးဇူးပြု၍ အောက်တွင်စာရင်းပြုစုပါ၊ သို့မဟုတ် High Commission နှင့်အတည်ပြုပါ)
Antigua နှင့် Barbuda တို့၏သံတမန်၊ တရားဝင်နှင့် / သို့မဟုတ်သာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများအတွက်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်
အယ်လ်ဘေးနီးယား အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ လီဆိုသို စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း
အင်ဒိုရာ အက်စ်တိုးနီးယား လီချင်စတိန်း ဆာမိုအာ *
အာဂျင်တီးနား ** ဖီဂျီ လစ်သူ ဆန်မာရီနို
အာမေးနီးယား * ဖင်လန် လူဇင်ဘတ် စေးရှီးလ် *
သြစတြီးယား ပြင်သစ် မကာအို * စင္ကာပူႏုိင္ငံ
ဘဟားမား ဂမ်ဘီယာ မက်ဆီဒိုးနီးယား ဆလိုဗက်ကီး
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် * Georgia ဒါဂတ်စကာ ဆလိုဗေးနီး
ဘာဘေးဒိုးစ ဂျာမနီ မာလာဝီ ဆော်လမွန်ကျွန်းစု *
ဘယ်လ်ဂျီယမ် ဂရိနိုင်ငံ မေလးရွား တောင်အာဖရိက
belize ဂရင်းလန်း မော်လ်ဒိုက် * စပိန်
ဘိုလီးဗီးယား * နေးဒါ မော်လ်တာ ဆူရာနမ်
ဘော့စနီးယား ဂွာတီမာလာ Mauritania * ဆွာဇီလန်
ဘော့ဆွာနာ ဂီနီ -bissau * မောရစ်ရှ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ
ဘရာဇီး ဂိုင်ယာနာ မက္ကစီကို ဆွစ်ဇလန်
ဘူလ်ဂေးရီးယား ဟေတီ Micronesia တန်ဇန်းနီးယား
ဘူရွန်ဒီ ဟွန်ဒူးရပ်စ် မိုနာကို တီမောလက်စ်တီ *
ကမ္ဘောဒီးယား * ဟောင်ကောင် မိုဇမ်ဘစ် * တိုဂို
ကိပ်ဗာဒီ ဟန်ဂေရီ နီပေါ * ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို
ကွတ်ကျွန်းစု အိုက်စလန် နယ်သာလန် တူနီးရှား
တရုတ်နိုင်ငံ အိႏၵိယ နီကာရာဂွာ ကြက်ဆင်
ချီလီ အင်ဒိုနီးရှား နီယူး Tuvalu
ကိုလံဘီယာ အီရန် ++ ေနာ္ေဝး ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ
ကိုမိုရို * အိုင်ယာလန် ပလောင် * ယူကရိန်း
ကော့စတာရီကာ လူသား၏ကျွန်း ပနားမား * အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု **
ခရိုအေးရှား အီတလီ ပီရူး ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
ကျူးဘား ဂျမေကာ ဖိလစ္ပုိင္ ဥဇဘက်ကစ္စတန် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင်ထိရောက်မည်)
ဆိုက်ပရပ်စ် ဂျော်ဒန် * ပိုလန် ဗာနူအာ
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ကီရီဘာတီ * ပေါ်တူဂီ ဗာတီကန်စီးတီး
ဒိန္းမတ္ ကိုးရီးယား (မြောက်) ကာတာနိုင်ငံ ဗင်နီဇွဲလား
ဂျီဘိုတီ * ကိုးရီးယား (တောင်) ပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်း ဇမ်ဘီယာ
ဒိုမီနီ ကိုဆိုဗို ရိုမေးနီးယား ဇင်ဘာဘွေ
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ လာအို * ရုရှားနိုင်ငံ
အီကွေဒေါနိုင်ငံ လတ်ဗီးယား စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်
အီဂျစ် * လက်ဘနွန် * စိန့်လူစီယာ
Akotiri နှင့် Dhekelia ကေမန်ကျွန်းစု မွန်ဆာရတ် လူသား၏ကျွန်း
အန်ဂွီလား ဂျီဘရောလ် စိန့်ဟယ်လီနာ
ဘာမြူဒါ ဂါဇီး တူရကီနှင့်ကိုင်းကော့စ်
British Virgin Islands ဂျာစီ Pitcairn-ကျွန်းများ
ပြင်သစ်ဂီယာနာ မာတီနစ် စိန့် Pierre & Miquelon
ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား Wallis & Futuna-
Bonaire စိန့် Eustatius
ရူရာ စိန့် Maarten
Jan Mayen (နော်ဝေ) ဖရိုးကျွန်းစု (ဒိန်းမတ်)
Antigua နှင့် Barbuda သို့ဝင်ရန်ဗီဇာမလိုအပ်သောအခြားနိုင်ငံများ -
အယ်လ်ဘေးနီးယား အဇာဘိုင်ဂျန် ချီလီ
အာမေးနီးယား ဘူလ်ဂေးရီးယား ဂျပန်
ဘရာဇီး Georgia လီချင်စတိန်း
ကျူးဘား ကာဂျစ္စတန် မော်လ်ဒိုဗာ
ကာဇကစ္စတန် မက္ကစီကို ပီရူး
ကိုရီးယား နော်ဝေးနှင့်ကိုလိုနီ ေတာင္ကုိးရီးယား
မိုနာကို ဆန်မာရီနို တာဂျစ်ကစ္စတန်
ရုရှားပြည်ထောင်စု ဆွစ်ဇလန် ယူကရိန်း
ဆူရာနမ် တာ့ခ်မင်နစ္စတန် ဗင်နီဇွဲလား
* ဆိုက်ရောက်လာသည့်ဗီဇာ ++ ဗီဇာရောက်ရှိသည့်အခါခွင့်ပြုခဲ့။
အထက်ပါစာရင်းတွင်မပါ ၀ င်သောနိုင်ငံသားများသည်ဗီဇာလိုအပ်သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ကင်မရွန်း၊ ဂမ်ဘီယာ၊ ဂါနာ၊ အိန္ဒိယ၊ မိုဇမ်ဘစ်၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ပါကစ္စတန်၊ ဆီယာရာလီယွန်နှင့်သီရိလင်္ကာတို့ဖြစ်သည်။
ခရုဇ်သင်္ဘော visitors ည့်သည်များ မည်သူသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဗီဇာလိုအပ်လိမ့်မည်နည်း။ သူတို့သည်နံနက်အချိန်၌အန္တိဂွါနှင့်ဘာဘူဒါသို့ရောက်ရှိပြီးညနေခင်းမှထွက်ခွာသွားပါကဗီဇာမလိုအပ်ပါ။
''Intransit 'ခရီးသည်များ ပုံမှန်အားဖြင့်ဗီဇာလိုအပ်သောတစ်ချိန်တည်းတွင်ခရီးသွားခြင်း၊ အန်တီဂွာနှင့်ဘာဘူဒါနိုင်ငံများသို့ ၀ င်ရန်အတွက်ဗီဇာမလိုအပ်ပါ။ သူတို့၏ခရီးကိုသက်သေပြပြီးလေဆိပ်၏ထိန်းချုပ်ထားသောနေရာမှမထွက်ခွာပါ။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကဲ့သို့သောသင်လက်မှတ်ထိုးနိုင်သည့်မည်သည့်နိုင်ငံအတွက်မဆိုတရားဝင်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ခရီးသွားလာခွင့်စာရွက်စာတမ်း။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည်ရောက်ရှိသည့် နေ့မှစ၍ အနည်းဆုံး ၆ လသက်တမ်းရှိရမည် Antigua နှင့် Barbuda တို့တွင်ဗီဇာထုတ်ပေးရန်အတွက်စာမျက်နှာအလွတ်တစ်ခုသာရှိရမည်။ )
လတ်တလောအရောင်ပတ်စ်ပို့ဓာတ်ပုံ (45mm x 35mm) ။
ဗီဇာကြေး: တစ် ဦး တည်းဝင်ခွင့်£ 30.00 အကွိမျမြားစှာ entry ကို£ 40.00
စာတိုက်အမိန့်ကိုမှပေးဆောင်လုပ်လေ၏ ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ အမြင့်ကော်မရှင် (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွင်းတင်သွင်းလျှင်) ။
Sterling International Money Order (လျှောက်လွှာကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းပြင်ပမှပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါက) ငွေလွှဲစာများကိုပေါင်ဖြင့်ထုတ်ရမည်။ အခြားမည်သည့်ငွေကြေးမဆိုငွေလွှဲခြင်း မဟုတ် လက်ခံပါ။
အဆိုပြုထားသောအထောက်အထားများသည်ခရီးသွားအေးဂျင့်မှလက်မှတ်ကြိုတင်လက်မှတ်သို့မဟုတ်လက်မှတ်ထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာမျိုးစုံကို ၀ င်ခွင့်လျှောက်ထားသူများကိုသာထုတ်ပေးသည် ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ.
သင်၏နေထိုင်မှုကြာချိန်သို့မဟုတ်သင့်အိမ်ရှင်ထံမှဖိတ်စာစာအတွက်နေရာထိုင်ခင်းအထောက်အထား။ ကျောင်းသားများအတွက်၊ သင့်ကျောင်းမှလက်ခံသည့်စာနှင့်သင်၏လေ့လာမှုမစတင်မီသင်မည်သည့်နေရာတွင်နေထိုင်မည်ကိုအသေးစိတ်ပေးပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ခရီးသွားသူများအတွက်သင်၏ခရီးစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အလုပ်ရှင်ထံမှစာတစ်စောင်ပေးပါ။
ကြင်နာစွာပါဝင်သည် အတွင်းပြန်လာမှတ်ပုံတင်စာပို့ခများအတွက်£ 7.00 ဥရောပ.
ယင်းကိုဆက်သွယ်ပါ Antigua နှင့် Barbuda High Commission ဗီဇာနှင့်ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်။